काठमाडौं । झापाको मेचीनगर–८ की रोशा फुयाल नेपालको रियालिटी सो सारेगम लिटिल च्याम्पियनमा सहभागी भएसँगै चर्चामा आइन् । सुमधुर स्वरकी गायिका रोशाको स्वरमा रहेको ‘मलाई बिर्स नभिनिदेउ’ गीतको भिडियो सार्वजनिक
ज्ञानेन्द्र विवश | नरोत्तमदास श्रेष्ठ– नेपाली कलाका एक सुनाम । वरिष्ठ कलाकार श्रेष्ठ कवि, कलासङ्कलक र ग्यालरी सञ्चालकका रूपमा समेत परिचित थिए । उनको अवसानसँगै उनका कामको समेत सम्झना ओझेलिँदै
काठमाडौं । बलिउड चलचित्र मनोरञ्जन को एक ठूलो स्रोत हो। ८०–९० को दशकमा इन्टरनेट नभएको समयमा परिवारका सबैजना सँगै बसेर चलचित्र हेर्ने गर्थे । तर अहिले समय बदलिएको छ र
काठमाडौं । मलाइका अरोरा बलिउडकी फिट र ग्ल्यामरस नायिका हुन् । मलाइकाले आफ्नो फिट शरीरमा आफ्नो ग्ल्यामरस लुकलाई लाइमलाइटमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्छिन् र उनी सधैं सफल हुन्छिन्। आफ्नो फिट
विवाहको चर्चाबीच सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​र कियारा आडवाणीको ब्रेकअप ! ‘शेर शाह’को सुपरहिट जोडीको किन भयो ब्रेकअप ?
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​र कियारा आडवाणी लामो समयदेखि एकअर्कालाई डेट गरिरहेका छन् । उनीहरु दुबै रिलेशनशिपमा रहेको खबर पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । तर, भर्खरै
मनोज बाजपेयीको प्रेमकथामा ‘हेयर आयल’ एंगल, शबाना रजाको कपालमा तेल देखेपछि लठ्ठ परेका थिए मनोज
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता मनोज बाजपेयीलाई इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा सफल अभिनेतामा गनिन्छ। मनोज बाजपेयीले आफ्नो करियरमा हालसम्म ७० भन्दा बढी फिल्ममा काम गरिसकेका छन् र शनिबार आफ्नो ५३ औं जन्मदिन मनाउँदैछन्।
प्रितम आचार्यको स्वरमा रहेको ‘आमा’ आउँदै
काठमाडाैं । प्रितम आचार्यको स्वरमा रहेको आमा गीत आगामी वैशाख ९ गते शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएको छ। रङ्गकर्मी सरस्वती अधिकारी, प्रितम आचार्य, रौनक गर्तौला र अभिश्री बस्नेतको अभिनयमा रहेको गीत
काठमाडौं । सौगात मल्ल, बुद्धि तामाङ र दीया पुन स्टारर चलचित्र ‘मन्त्र’ सेन्सर पास भएको छ । यही बैशाख १६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्रले यूनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको हो । केन्द्रीय